Kenya oo Ka Warbixisay Mushaaraadka ay Qaataan Ciidamada ka Jooga Gudaha Soomaliya
Wixii ka dambeeyay markii Midawga Yurub ay jareen boqolkiiba labaatan lacagta ay siiyaan Ciidamada AMISOM sanadkaan,hawgalka AMISOM waxa ay helaan lacago gaaraysa €20 million bilkasta sida la ogaaday.
Ciidamada dawlada Kenya oo qayb ka ah hawgalka AMISOM ee Somaliya waxa uu mushaarkoodu u dhigmaa $1,028 (Sh103, 828) bishii,laakiin ciidamadu waxa ay qaataan $828 (Sh83,628), $200 oo u dhigantana (Sh20,200) waxa ka goosata dawlada oo canshuur ahaan uga reebata.
Ururka Midowga Yurub oo dhawaan ku dhawaaqay in uu jaray 20% Dhaqaalihii uu ku taageeri jiray Howlgalka Amisom, Ayaa ururka waxa uu sharaxaad ka bixiyay sababihii uu dhaqaalahaas uu ujaray.
Wakiilka Midowga Yurub ee Somaliya Michele Chevvone ayaa sheegay sababta ciidamada Amisom looga jirtay Dhaqaalahaasi inay tahay in Midowga Yurub uu u weeciyay qarashkaasi meelo kale oo Somaaliya ka mid ah.
Michele Chevvone ayaa tilmaamay in aan si kale loo fasirin lacagaha laga jaray Amisom balse lacagaas loo weeciyay meelo kale oo soomaliya ah midowga yurub ayaa soomaliya siiya sanad kasta 200 million oo Dollar.